Obama oo balaayiin dollar u ballanqaaday Afrika – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha Maraykanka Barrack Obama, ayaa Shirka Madaxda Africa iyo Maraykanka uga socda Washington ka sheegay in Maraykanku uu Africa siinayo Lacag gaadhaysa $33 Bilyan oo Doolarka Mareykanka ah.
Obama ayaa sheegay in lacagtaas badankeed lagu maal gelin doono korontada. Waxa uu sheegay inuu doonayo in Africa ay wada yeeshaan wada shaqayn saaxibtinimo oo dhinaca horumarka iyo iskaashiga ganacsiga ah.
“Waxyaabaha Ugu sareeye ee aanu balanqaadnay waxaa ka mid ah; in maanta Maraykanku Kordhinayo balanqaadyadii aanu samaynay oo aanu ka dhigayno saddex Boqol oo Milyan oo Doolar ($300M) Sanadkiiba. Sidoo kale waxa jiri doona $12 Bilyan oo ah balanqaadyo cusub oo aanu ku dhawaaqnay Todobaadkan. Waxaanu sidoo kale hirgalinaynaa Lacag isku gaynteedu gaadhayso $26 Bilyan oo Dollar oo Africa lagu xoojin doono.” ayuu yiri Madaxweyne Obama
Madaxweynaha Maraykanka ayaa sheegay in dhaqaalaha Maraykanku siinayo Africa badankiisu ka imanayo Shirkaddo waaweyn oo maraykan ah, sida Coca Cola iyo General Electric. Waxa uu sheegay inay Africa dhinaca Korontada ka taageeri doonaan islamarkaana sahli doonaan sidii Xaafaddaha iyo Ganacsiyadda yaryar ee Africa u heli lahaayeen Koronto ku filan.
“Muhiimadda dhabta ah ee Maraykanku leeyahay waxay tahay in Africa la maalgashado, islamarkaana waxaanu maanta sharxaynaa ka dawlad ahaa iyo saaxiibadeena ahaanba balanqaadyada aanu samayno $33-ka Bilyan waxa lagu taageeri doonaa Horumarka Africa iyo Shaqooyinka maraykanka. Ilaa 10,000 Shaqo ayaa waxay taageeraan sidii ganacsiga Africa loo horumarin lahaa. Dhawrka maalmood ee Shirweynahani socodana waxaynu ku Falaqayn doonaa sidii loo wada shaqayn lahaa” ayuu sidoo kale yiri Obama.
Madaxweyne Obama ayaa dhanka kale sheegay in dhibaatada amaan ee heysata Afrika ay tahay Alshabaab-ka Soomaaliya iyo Boko Haram-ka dalka Nigeria, labadaasoo ku xiran Alqaacidda.
Maraykanka iyo 50 Madaxda Africa ka mid ah ayaa Shirweyne ku leh Washington, taasi oo lagu tilmaamay shirkii ugu balaadhaan ee Madaxda Africa iyo maraykanka dhex mara. Maraykanka ayaa maalgalinta Africa uga dan leh tartan uu kula jiro Shiinaha oo hore maalgalin uga sameeyay wadamo badan oo Africa ah, ganacsi fiicana ku leh Africa, sida ay sheegayaan dadka Odorosa Siyaasadda iyo ganacsiga.
Somalia’s president expects new military push to begin in days